Dadka Yurub oo Daacish u Arkay Halistooda Ugu Weyn
Dadka Yurub ayaa kooxda Daacish u arkay halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay daabacday xarunta cilmi-baarista ee Pew.
Is-beddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ugu weyn ee ay qabaan dadka Yurub, halka qul qulka dadka qaxootiga ahna ay u arkaan inay tahay halista saddexaad ee ay wajahayaan, sida lagu sheegay warbixinta Pew.
Kaliya 17% dadkii ra’yi uruurinta lagu sameeyey ee toban dal oo ka mid ah Yurub, ayaa sheegay in Daacish ay u arkaan halis aan weyneyn, halka kaliya 3% ay sheegeen inaysan wax halis ah ku hayn Daacish.
Weeraradii argagixiso ee magaalooyinka Paris iyo Brussels ayaa argagixisanimada dhigay kaalinta koowaad ee liiska waxyaabaha walaaca ay ka qabaan dadka Yurub.
Si kastaba, dadka Yurub badankood ma qabaan in la kordhiyo qarashka lagu bixiyo milatariga, ayaga oo ka cabsi qaba in kordhinta ciidamada milatariga ee la dagaalamaya argagixisada ay hogaamin karto naceyb sii kordha oo keeni kara rabshado cusub, sida ay sheegtay warbixinta.
Ra'iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo VOA u Warramay
Kenya oo Xirtay Nin Shabaab ah oo ku Socday Soomaaliya
Culimada Minnesota oo ka Hadlay Weerarkii Orlando
Xildhibaanada Somalia oo ka Doodaya Xuquuqda Madaxdii Hore